Mofon’aina – ALAROBIA 08 NOVAMBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAROBIA 08 NOVAMBRA 2017
8 novambra 2017
10 Ary rehefa mby akaiky Farao, dia natopin’ ny Zanak’ Isiraely ny masony, ka, indreo, ny Egyptiana tamy manenjika azy; dia raiki-tahotra indrindra ny Zanak’ Isiraely ka nitaraina tamin’ i Jehovah.11 Ary hoy koa izy tamin’ i Mosesy: Moa tsy nisy fasana va tany Egypta, no nentinao ho faty atỳ an-efitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay hianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? 12 Tsy izao va no teny nolazainay taminao fony tany Egypta hoe: Aoka izay fa avelao ihany izahay hanompo ny Egyptiana? Fa aleonay manompo ny Egyptiana toy izay ho faty any an-efitra.13 Ary hoy Mosesy tamin’ ny olona: Aza matahotra hianareo, mijanòna, fa ho hitanareo ny famonjen’ i Jehovah, izay hataony ho anareo anio; fa ny Egyptiana, izay hitanareo anio, dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay.14 Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.
EKSODOSY 14 :10-14
EO AM-PIANDRASANA NY TOMPO
Tandindon’ny fiainan’ny mpino miatrika zava-tsarotra eo am-piandrasana ny fiavian’ny Tompo ny tranga nahazo ny Zanak’Israely eto . Eo am-piandrasana ny Tompo dia:
1-Ialao ny fanomezan-tsiny (and 11-12)
Fanomezan-tsiny an’i Mosesy no nibahana tao an-tsain’ny vahoaka rehefa injay ka tazan’izy ireo nanaraka avy ao afara i Farao sy ny miaramilany (and 10). Toe-tsaina mpahazo ny maro koa matetika ny fanomezan-tsiny ny mpitarika rehefa injay ka tojo ny sarotra na ny tsy nampoizina. Fimonomononana, fanomezan-tsiny, fialana andraikitra no mipololotra ao am-pon’ny maro fa tsy mba fifanomezan-tànana sy fifampaherezana.
2-Itokio ny herin’ny Tompo (and 13-14)
Naverin’ Andriamanitra tamin’ny alalan’i Mosesy ilay teniny hoe: « Aza matahotra ». Narahina fampanantenana fa ny Tompo no hiady ho azy ireo. Teny fanomezan-toky eo anatrehan’ny sarotra izao teny izao. Mandra-piavin’ny Tompo dia tsy maintsy misedra ny sarotra ny mpino. Antoka handresena izany anefa ny herin’i Jesoa efa nandresy ny herin’i Jesoa efa nandresy ny fahafatesana sy ny teny fanomezan-toky nomeny antsika manao hoe: « aty amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia , Izaho efa naharesy izao tontolo izao »(Jao 16 :33)
Manao ahoana ny fihetsikao raha misy olana tampoka mitranga eo amin’ny fiainan’ny sampana na ny fiangonana?